10 xiisaha xiisaha leh ee Paris oo kaa dhigi doonta hadal la'aan | Wararka Safarka
Monica Sanchez | | General, Paris, Maxaa la arkaa
Paris waa magaalo leh badan oo la bixiyo. Meelo ka buuxo soo jiidashada taas oo ah inaad naftaada ku weydo dadka tirada badan ama taalooyinka cajiibka ah ee qurxinta caasimada, adoo ku raaxeysanaya jawi wanaagsan sanadka oo dhan.
Iyada oo aag of 105 kiiloomitir oo laba jibbaaran, oo leh yaabab badan si ay u arkaan gees kasta, hubaal ah 10 xiisaha París inaan kuu sheegayo, mase aadan aqoon iyaga.
1 Gees ka mid ah Masar oo ku taal caasimadda
2 Waxaa jira saddex taallo xorriyadda!
3 Quraac, rooti iyo jiis. Iyo qado, iyo casho ...
4 Miyaad qiyaasi kartaa Paris oo leh guillotine aad u weyn?
5 Quaterka Latinka, oo ah meesha ugu jawiga badan
6 Kiiloomitir eber, fagaaraha Notre Dame
7 Paris waxay ka fogaatay inay yeelato 13 degmo
8 Jaranjarada muquuninta ee Madxafka Louvre
9 Qarsoodi ah Notre Dame Cathedral
10 Salaan, farshaxan
Gees ka mid ah Masar oo ku taal caasimadda
Matxafka “Louvre Museum Pyramid” waxaa naqshadeeyay naqshadeeye Ieoh Ming Pei, waxaana la furay 1989. Waxay leedahay dherer dhan 20,1m iyo wadar ahaan 673 dhalooyinka laalaamiyay. Iyada oo culeyskiisu yahay 180 tan, gudaha heer kulku wuxuu lamid yahay kan ka diiwaan gashan Ahraamta Cheops, ee Masar: 51 darajo Celsius. Maxaa intaa ka badan, leeyahay cabirro isku mid ah.
Waxaa jira saddex taallo xorriyadda!
Kuwa ugu caansan waa Maraykanka, koonfurta jasiiradda Manhattan, laakiin waxaa jira laba nuqul oo ku yaal Faransiiska: mid ka mid ah Colmar, oo la furay 2004, iyo midka kale ee Paris. Jasiiradda Swan. Qeybta dambe waxaa naqshadeeyay farshaxanka reer Talyaani-Faransiiska Auguste Bartholdi, waxaana la daah-furay July 4, 1889.
Quraac, rooti iyo jiis. Iyo qado, iyo casho ...
Haddii aad waligaa maqashay qof dhahaya Parisians maalin walba way cunaan rootiga iyo farmaajo mana rumaysatid, waad khaldantay. Iyaga, labadan cunto waa aasaasiIn badan oo ay xitaa raacaan sharciyo aad u adag si loo helo baguettes-ka ugu fiican iyo farmaajada ugu fiican. Iyo sida wanaagsan ee ay u cusub yihiin loo sameeyo ...!
Miyaad qiyaasi kartaa Paris oo leh guillotine aad u weyn?
Wax yar ayaa ka hadhay dhisidiisa. Waana taas, Bandhigga Caalamiga ah ee 1889, tartan ayaa loo qabtay si loo naqshadeeyo shaqo taariikhi ah, taas oo ku dhammaan doonta inay tahay raad magaalada. Soo jeedimaha kale waxaa ka mid ahaa dhiso guillotine sare oo 274 mitir ah, si loo xuso kaalintii Faransiiska ee falkan. Nasiib wanaag, aakhirkii, waxaa la go’aansaday in la dhiso Eiffel Tower, oo aan lahayn wax meel ka dhac ah isla markaana ku faani kara inuu leeyahay qiime qaali ah oo sare.
Quaterka Latinka, oo ah meesha ugu jawiga badan
Waxay ku taal koonfurta Ile de la Cité, waana mid ka mid ah xaafadaha ugu nolosha badan. Intii lagu guda jiray xilligii dhexe, waxaa deganaa arday ku hadla laatiinka. Waa in la sheegaa in kani ka mid ahaa dhibco kulul xilligii Kacaankii 1968-kii, inkasta oo maanta ay tahay xaafad deggan, oo leh makhaayado iyo makhaayado wacan oo kugu martiqaadaya inaad fadhiisato oo aad nasato.
Kiiloomitir eber, fagaaraha Notre Dame
Maaha xarunta Faransiiska, laakiin waa Paris. laga bilaabo halkan, laga bilaabo Point Zéro ee ay ugu yeeraan, waad xisaabin kartaa masaafada dhammaan waddooyinka magaalada. Gobolka inta badan waxaa la sheegaa in kuwa cagta saara ay u badan tahay inay soo laaban doonaan, maadaama nasiib wanaag uu la socon doono inta ay joogaan.
Ma garanayno inay run tahay iyo in kale, laakiin dhab ahaan meeshu waa soo jiidasho.
Paris waxay ka fogaatay inay yeelato 13 degmo
Lambarka 13 wuxuu ahaa (welina yahay, illaa maanta, dhaqamo badan) waxaa loo tixgeliyey tirada nasiib xumada. Intii lagu guda jiray Kacaankii Faransiiska ee 1795, 12, iyo 48 hoosaadyo ayaa la aasaasay, laakiin ma aysan dooneynin inay dhisaan mid kale cabsi laga qabo in magaaladu nimco ka dhacdo. Wax aan sida iska cad u dhicin, maxaa yeelay maanta waxay leedahay 20 degmo waana ka nool tahay sidii hore.
Jaranjarada muquuninta ee Madxafka Louvre
Matxafka 'Louvre Museum' waxaan ku arki karnaa kuna isticmaali karnaa jaranjarada muraayadaha qurxoon. Laakiin, ma ogtahay inay jiraan noocyo kala duwan iyo inay leeyihiin shaqooyin kala duwan? Waa cunsurro soo jiita indha-indheyn fara badan, sidaa darteedna naqshadeeye caan ah ayaa 10 sano ku qaatay barashadooda. Hadda wuxuu qabtay shaqo layaableh, taas oo uu kaga sheekaynayo qisadiisa, ahmiyada ay leeyihiin, sababta guusha u gaadhay, iyo waxyaabo kaloo badan Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso shahaadada dhaqtarka ee dhismaha Alberto Sanjurjo.
Qarsoodi ah Notre Dame Cathedral
Waa kaniisada Gothic ee ugu caansan adduunka, iyo taalada ugu booqashada badan magaalada Paris. Waxaad ka heli kartaa Ile de la Cité, halkaas oo ah gargoyles ee ka daadgureynaya biyaha saqafyada, kuwaas oo la aaminsan yahay inay soo tooseen habeenkii Joan of Arc lagu gubay qori dusha.
Kuma filna in la yiraahdo Bonjour ama Bonsoir (sida kiisku noqon karo) qaab caadi ah oo cod ah, laakiin halkii wax badan ku celceliya si ay ugu soo baxdo sida dabiiciga ah intii suurtagal ah. Parisiansigu waxay jecelyihiin afkooda, markaa hadaad ugu salaanto ugu badnaan, maaddaama oo dhammaystirnaanta dhammaystiran aysan jirin - salaan dhammaystiran, waxaan kuu xaqiijinayaa inaad ka bogan doontid wadahadalka aad iyaga la leedahay wax badan.
Paris waa magaalo marwalba oo la lumiyo ay farxad u tahay, gaar ahaan ka dib markaad akhrisato waxyaalahan xiisaha leh, miyaadan u malayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Paris » Waxyaabaha xiisaha leh ee Paris kaa dhigi doona hadalka la'aan
Saint Lucia, xagaaga sanadka oo dhan
U safri Krakow, waxa magaalada ka dhex muuqda